Iibso oo Iibso Kaararka Hadiyada khadka tooska ah! | Martech Zone
Iibso oo Iibso Kaararka Hadiyada khadka tooska ah!
Talaado, Disembar 26, 2006 Talaado, Disembar 26, 2006 Douglas Karr
Xilliga ciidaha. Ma ogtahay in 10% dhamaan kaararka hadiyadaha aan waligood la soo furan? Taasi waa lacag la'aan dukaamada.
Ma heshay kaarka hadiyadda oo aanad waligaa isticmaali doonin? Ku iibi Isweydaarsiga!
Kahor intaadan aadin iibsashada dhammaan asxaabtaada, qoyskaaga, iyo dadka kulashaqeeya Kaararka Hadiyadaha, waa inaad ka iibsataa Isweydaarsiga… Qiimo jaban!
Heck, iyadoo sicir-dhimista celcelis ahaan ay tahay 12% markaad iibsaneysid, maxaa diidaya inaad kaararka hadiyadaha ah ka iibsato khadka tooska ah oo kaliya aad dukaamaysigaaga joogtada ah kula sameysato?
Waan hubiyey maanta waxaan iibsan karaa $ 40 Starbucks Card oo $ 35 ah !!! Taasi waa Mocha bilaash ah!
Xusuusin: Swapagift.com waxay cadeyneysaa isku dheelitirka kaarka hadiyada inta aan lacagaha la bixin. Waa maxay fikrad fiican!
2007 Fadlan Soo Kordhi Tifatirayaasha cusub
26, 2006 at 2: 16 PM
Mid kale ayaan helay, sidoo kale:
Xulashada Swapagift.com waa mid aad u fiican. Waxaan iibsaday dhowr kaar, oo had iyo jeer waxay leeyihiin dallacsiin iyo iibin. Kaliya iibsaday kaararka qarsoon ee victoria sida 20% off oo aan lahayn wax lacag maraakiib ah